ललितपुर : वाग्मती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ बाट एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । नेपालमा हालसम्म एकल महिलाले मात्र मासिक भत्ता लिँदै आएका थिए । तर, वाग्मती गाउँपालिकाले भने एकल पुरुषललाई पनि भत्ता दिने भएको हो ।
गाउँपालिकाले ६० देखि ७० वर्ष उमेर पुगेका एकल पुरुषलाई मात्र सो सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
‘६० वर्ष नाघेका एकल पुरुषले मात्र मासिक भत्ता लिन पाउनेछन् तर ७० नाघेकालाई दिँदैनाैं’, वाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोकचनले बताए ।
‘एकल पुरुष प्रायः पीडित र बेसहारा हुने भएकाले उनीहरूको जीवन गुजारा गर्न सजिलो होस् भनेर भत्ताको व्यवस्था गरेका हौँ,’ उनको भनाइ छ ।
एकल पुरुषले कम मात्रामा छोरा–बुहारीको साथ पाउने हुँदा यस्तो निर्णय अघि बढाउन सही लागेको उनले जानकारी दिए ।
७० वर्ष नाघेका व्यक्तिले वृद्ध भत्ता पाउने भएकाले दोहोरो सुविधा उपभोग भने गर्न नदिने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि प्रत्येक एकल पुरुषले महिनाको एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । यो खबर आजको ‘सौर्य’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।
‘एकल पुरुषलाई दिने भनेको मासिक भत्ता वितरणको लागि वाग्मती गाउँपालिकाले वितरणको कार्यविधि बनाउँदै छ,’ लोकचनले भने, ‘वाग्मती गाउँपालिकाले ३३ करोड ६७ लाखको नीति तथा योजना पास गरेको छ ।’ ‘वाग्मती गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेपछि गाउँमा निकै उत्सव छाएको छ,’ इकुडोलका अध्यक्ष राजकुमार दलामीले बताए ।
‘हाल वाग्मती गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई दिने भनेको भत्ताको सूचना सही या गलत भनी बुझ्न दैनिक फोन आउँछ,’ दलामीले भने, ‘गाउँपालिकामा वृद्धवृद्धा धाउने क्रम बढेको छ ।’
प्रकाशित : आइतबार, असार २४, २०७५१०:०९
​कस्ता महिला र बालबालिका खतरामा ?
मोदीको सुरक्षामा पाँच हजार सुरक्षाकर्मी, बुलेटप्रुफ र जामर गाडी
जोशी अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्चको दोस्रो वरीयतामा रहेका ओमप्रकाश मिश्रले के भने ?
पशुपति आर्यघाटमा पनि यसरी हुन्छ कमिसनको चलखेल !
वाम एकता: मिति सारेकाे सारेकै, केमा अड्कियो गाँठो ?
तेल ढुवानीमा चोरी नियन्त्रण गर्न ‘भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम’ काे तयारी